Smart tekinoroji uye tekinoroji kutonga kwepasirese kuchaponesa mamiriro ekunze: Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa3 December 2019	• 9 Comments
Hurumende yepasi rose yehunyanzvi ndiyo yega mhinduro yekuponesa pasi redu kubva mukuparadzwa nekuda kwemamiriro enjodzi yemamiriro ekunze ari kutitungamira. Kana nyeredzi dzemafirimu dzichirira kurira kwearamu, iwe watobvumidza hafu yehuwandu hwenyika kuti chimwe chinhu chinonyatsofanirwa kuitwa, nekuti kutarisa kwakanaka uye kunamatwa kwevateveri ndiko hwaro. Musikana ane mabraids ari kuitawo zvakanaka, sekunge mutori wenhau akareruka kubva kudzika dzepasi anopa vatungamiriri venyika kuputika.
Kuti sekuru guru remusikana iyeye ane ma-braids, Greta Thunberg, iyo Arrhenius mhedzisiro (kudziya kwepasirese) uye akazvigadzirira iye Nobel Prize semuvambi weweyi mubairo, hatidi kunzwa. Iyeye 'munyori ari nyore', Rutger Bregman, anodaidzira a yakanyanya tekinoroji kutonga kwenyika, isu tinofunga zvakanaka. Mushure mezvose, iri 1 miniti ye12, saka iwe unofanirwa kuita zvakaoma. Isu tasvika pakutenda kuti kuburikidza neavo ese akanaka emuvhi nyeredzi nyeredzi uye isu tasvika pakutenda kuti kuburikidza nemutambo unoshamisa wekuputika uye kutsakatika. Munhu wepakati haangotore dambudziko rekufunda chokwadi, asi anovimba nekuvimba mune nyeredzi dzemafirimu, vezvematongerwo enyika uye vezvenhau.
Mukuita izvi zvinosvika kune UN kuve iyo huru yekutyaira kuseri kwemamiriro ekunze kutya uye yakatoratidzwa kuti Kuwedzera Kunopandukira pachena kunotsoropodza CIA Gene Sharp (ruvara shanduko) nzira kuita kuti vanhu vazive kuti tava kufa. Panguva imwecheteyo, iyo meseji yekumashure inodzivirirwa. Masayenzi akakurisa uye ane mukurumbira, anogona kuratidza kuti pasi haripisi nekuda kwe CO2, vari kurwiswa zvakaoma. Izvo zvinotoitika mumuviri:
"Vanopfuura 200 vanhu, kusanganisira gumi nemasayendisiti, vari kuvanda kuGermany. Ndiri mumwe wavo. Ini ndinogona kukuudza kuti ini ndiri muMunich, asi handigoni kukuudza hotera yangu. Ini ndinogona kukuudza iwe kuti masayendisiti achasangana neChishanu neMugovera kugovana ruzivo rwesaenzi, asi ini handikwanise kukuudza kwauri kupi. Musangano uyu, umo masayendisiti acharatidza humbowo hunopokana nedambudziko remamiriro ekunze, wakarongwa kune veruzhinji, asi matsotsi emamiriro ekunze akatimanikidza kuvanda. Hurumende yeGerman inoramba kuchengetedza masayendisiti panjodzi yemhirizhonga. "
Icho chidimbu chakabviswa ichi chinyorwa, iyo zvakare inoratidza kuti zvokwadi ndeyechipiri kune manzwiro. Muchokwadi, mafungiro akadaro akagadzirwa kuti vanhu vanoona zviri pamutemo kuti nhanho inotorwa pamwe nehutsinye uye nhanho dzehondo. Mushure mezvose, kana pasi richityisidzira kuparara, saka zano nderekuti, isu tinofanira kuzvidzivirira kubva kuvanhu avo vasingade kuzviona.
Boka revatendi remamiriro ekunze rinofanira kuchengetedza vanhu nepasi kubva kune vasingatendi mapofu. Uye saka isu tinodaidza kuti Inquisition yeSpanish pamusoro pedu pachedu mu jaketi nyowani. Munhu anoda rugare anoda kwazvo kuponesa pasi anongoerekana asarudza kurega nzira. Asi hesi, isu tajaja iko kufunga kune iyo nyika yedu yakabudirira kumadokero, nekuti kunyangwe isu "tichaunza demokrasi" kune idzo nyika dzinotyisa dzeudzvinyiriri (mafuta-akapfuma), saka isu hatizengure kukanda zvinhu pasi nemadhimoni nemabhomba. Kana zvasvika kumamiriro ekunze, vanhu zvino vanosarudzirawo tsitsi uye hutsinye pasina tsitsi. Vanhu avo havana kumbobvira vatambura kuti vateerere kumasainzi ayo asingafanire kunzwiwa (sekuti panokwete, vanoisa minwe yavo munzeve uye vanonamira kune chavo chinzvimbo.
Iwe haugone kugonesa vanhu vanotenda pachokwadi kuti pasi richapera kana isu tikasaita chero chinhu nezvakasiyana, nekuti zvakanzi kwavari iyi ipfungwa dzakapfuura-dzemapapiro. Izvo hazvisi nezvechikonzero, asi zvakachena nezvekunzwa kwemarara. Iko hakuna kana imwechete yekuvandudza mamiriro ekunze inoziva iyo CO2 chaizvo uye kuti mhedzisiro yayo ndeyekuti inoita kuti pasi rive nyoro uye kwete kupisa. Kunyangwe kudzokorora chirevo ichi pano zvakare, chingaverenge, asi zvinobva zvangoita kuti zvitsitsinho zvinwire mujecha. Iwe haudi kunzwa izvozvo seanoshandura mamiriro ekunze. Iwe unogutsikana, nekuti iwe waona epurasitiki yakawanda kwazvo ichiyangarara mugungwa uye waona iyo polar bear huwandu ichiderera. Zvese zvakaitwa nevezvenhau kufurira mafungiro evazhinji zvinoratidzika kunge zvinopararira uye, sekugara pamwe nekuparadzira, chikamu chidiki diki chete chinozvinzwisisa. Izvi zvinodaro nekuti vanhu havangatende kuti hurumende nevezvenhau vanogona kureva nhema. Masasi anombundira musungo wawo wega sechakaipa chakakodzera kuponesa pasi (nevanhu uye mhuka dzese nezvirimwa).
Saizvozvo Rutger Bregman inodaidzira tekinoroji uye kana tava kuona kutaura kwechimiro checommunism munyika dzinoverengeka, ipapo tinogona kuziva kuti ndeapi mafambiro achatungamirwa nevazhinji. In ichi chinyorwa Ndakatsanangura kuti capitalism uye kuwedzera makambani kwakatungamira sei kumarudzi akawanda. Muchokwadi, izvo zvakaisa hwaro hwe 'communism mune jekete idzva'. MuEngland isu tatoona kuti Jeremy Corbyn makambani makuru inoda kurudzi zvekare (kugadzira varidzi venyika) uye isu tichaona izvozvi maitiro pese-pese, chokwadi kana iko kuronga kwenguva refu kwekuronga kwehupfumi kuri kuuya; kuparara uku uko kwakanyatsogadzirwa mhando 'kurudyi' (iyo yakabatana naDonald Trump, Boris Johnson, Thierry Baudet, Alex Jones, Jensen, nezvimwewo).
Kufunga kwakashata kunonzi 'kurudyi' uye kuti zita richaremerwa zvese nekudaro rinogadzira nzvimbo yekunyanyisa nzira yekupindira. Iyi fomu yakanyanyisa yekupindira ichave yakaumbwa nekomuniki mune jeketeti yetekinoroji. Izvo zvinotungamira kune kurambidzwa kwakasimba kwemaonero ese ayo anotyisidzira kune centralization yesimba. Mushure mezvose, iyo pfungwa yekufunga yakarova hupfumi panguva iyoyo uye iyo pfungwa yemafungiro inotyisidzira kune mamiriro ekunze.
Chii icho chinotaridzika seyakadai komubatanidzwa tekinoroji? Zvakanaka, kana hupfumi huchizove hwuri munzira yepasi rose, isu tinotanga tava nenguva yehurombo hunorwadza (uye nokudaro mhirizhonga uye kutya). Izvi zvinowanzo gadzira vheji yemagetsi ruoko rutsva rwakasimba runopa mhinduro. Zvinofanirwa kutarisirwa kuti panguva iyoyo vanhu vanozo gamuchira mari yekutanga semhinduro yechinhu chakanyanya kudiwa chemari. Iyo nzira yemari ichave isina kubhuroka panguva iyoyo zvekuti kupindira kwakanyanya kunodiwa.
Kugadzirisa kwakazara kwegadziriro yemari yepasirese, umo dhora rakatonga kwemakumi emakore (nemhedzisiro iyo US inogona kutonga pasi rese), ichave mhinduro. Kuparara kwehupfumi, nemhirizhonga munharaunda semhedzisiro, zvinomutsa kudana kwemhinduro kubva kumusoro. Iko kufunga kwekukasira kudonhedza kwepasi iyo yechipiri nharo inoda kupindira kwakasimba. Ose ari maviri achasimbisa kuchema kwe centralization kwesimba. Izvi zvinopedzwa netekinoroji.
Technocracy inoreva kuti kune yekare yakarongeka tekinoroji mhinduro yekuzviita zviri nani kubva zvino. Izvi zvomuzvarirwo zvakare zvinoda central management. Iyo blockchain uye 5G 'internet yezvinhu' smart grid ichapa mhinduro. Kugadziriswazve kwemari uye itsva yenyika yepasi rose sisitimu inogona kunyatso kupedzwa ine yepasi rose crypto currency standard. Kana, nekuwedzera, iwe uchigona kuwana hupfumi huchishanda zvakare nekupa vanhu mari yekutanga, ipapo unenge uine (nenguva iyoyo) huwandu hwakapera simba paruoko rwako.
Crystal mari inobatsira kwazvo kana tasvika kune dzakasimba matanho ekunze. Mukati me 'internet yezvinhu' iwe unogona kutarisa zvese zvekutengesa zvigadzirwa kana masevhisi zvakadzama. Iwe unogona ipapo kuona mune imwe yakawira swoop chii iyo nharaunda yechikafu chikafu ndeye uye kugadzirisa mitero nenzira.
Kuti zvive nyore, ngatiti pane kuchave neUN mari, semuenzaniso. Mari inogashira avhareji kukosha kwemamwe madhorobha emari (euros, yuan, madhora, rubles). Fungidzira kuti hurumende nyowani - ichipinda musarudzo yemagetsi (nekuda kwekukanganiswa kwehupfumi uye hwemagariro "yakakonzerwa nerudyi") - inopa zano rekudzosera mabhengi epakati uye kurasa zvikwereti zvese, wozozvitambidza pamari inodiwa. Kusunungura mari yeUN. Wese mugari anogamuchira 1000 UN-mari yekutanga mari pamwedzi. Mitengo yezvigadzirwa yakaiswazve uye hupfumi hwadzoserwa. Makambani makuru anoiswa nyika, kuti ivowo vasunungurwe negomo rechikwereti uye injini yehupfumi inotanga kutendeuka zvakare. Isu tatova mune yemhando yemakominisiti, asi mashesi haangakanganiswe nenguva iyoyo. Chero bedzi zvese zvikave zvakare zvakare.
Icho chitsva chakadai cheyero yekubhadhara yechikwereti (semuenzaniso iyo UN coin ichingofungidzirwa pano) inoita kuti zvese zvinyatsoteedzeredzwa mukati meiyo 5G grid ye 'internet yezvinhu'. Kana iwe ukazotenga packet yefodya kubva kune iwaya zviuru zvemari UN, haungoremadza nharaunda (izvi ndizvo zvichave mutemo), asi zvinokanganisa nehutano hwako. Kana iwe uchiri kudya nyama iwe uri kuitirawo zvakashata nharaunda, nekuti mombe idzo dzinoburitsa "nitrogen" uyezvezve zvirinani unorarama hupenyu hwemakwenzi hutano hwako.
Yako inishuwarenzi yehutano premium inogona kungoerekana yawedzera mu 'internet yezvinhu', nekuti zvese zvaunoshandisa zvinogona kuyerwa nekukurumidza. Yako mutero wezvakatipoteredza inogona zvakare kutaurwa zvakananga kubva kune yako UN coin cryptocurrency zviyero. Mune grid yakangwara, ine makamera anozivikanwa kumeso uye maikorofoni akarembera kwese kupi, zvinogona kuitika kuti kana iwe uchiti kune Albert Hein bhokisi hofisi, semuenzaniso, "ma'am, mune pundu yejamu kwandiri here?", Unokurumidza kugamuchira nzvimbo dzezvirango nekuti iwe washandisa izwi rekuti 'madam'. Mutemo mutsva wekusarura wedare redunhu redunhu unotaura kuti izvi zvinosarura boka reLBBTI. Iyo nzira yekutarisa nzanga yakavakirwa paChinese Sesame Chikoro chemuenzaniso yave kutoitwa kuunzwa dormantly muDutch nhabvu nhanho. Pfungwa dzezvirango zvobva zvoreva kuti kuderedzwa mumari yako yeUN.
Turkey, iyo nyika yandanga ndichidana kwemakore sesangano iyo ichatora masimba muEurope ye2023, yatove yakarongedza zvese kuunza iyo crypto lire mu2020. "Nyika yenyika ye blockchain-based digital lira yakarongerwa kupihwa neCentral Bank zvichienderana nechirongwa chegore rese chemutungamiri 2020, Cointelegraph yakaudza Turkey pa 5 Mbudzi."Verenga usati ichi chinyorwa.
Munyika yetekinoroji, zvese zvino cherechedzwa kubva patekinoroji yepakati chetekinoroji. Iyi tekinoroji inoita kuti zvikwanise kuita izvo pane imwe nhanho yakanaka kwazvo. Kana vanhu vakaita saRutger Bregman vanoshevedza hutongi hwekutungamira uye zvakare vanobatanidza kuti kuranga munhu wese anofunga zvakasiyana nezvenyaya dzemamiriro ekunze, semuenzaniso, tinogona kungogumisa kuti tekinoroji iyi inovhura nzira yemapurisa anofunga. Iyo Big Data masisitimu ayo ikozvino anotarisisa ese etu internet traffic, kusanganisira ese akangwara ma sensors, anozoziva chaizvo pfungwa dzega dzega dzinoomerera. Kana isu tikabatanidza izvo ne 'internet yezvinhu', mari inoteverwa (crypto) uye neChina-mhando Sesame Chikamu chekunongedza system, saka isu tiri kupupurira kuvakwa kwe fascist technocracy:
Mune tekinoroji yefascist, iyo nyika inogona kumanikidza mazano ayo kune vanhu vakaunzwa mukuvimbika kuzere uye vanoongororwa chero nguva yezuva.
Mubhuku rangu idzva ini ndinotsanangura kuti iri sei script rave riri pasherufu kwemazana emakore uye ini ndinotsanangurawo sei rainbow inomiririra kuunzwa kwechinamato chitsva chenyika. Muraraungu chiratidzo chehutongi hunyowani hwenyika huchaunzwa huchaisawo chitendero chitsva. Iwe unogona zvakare kurangarira iyo muraraungu kubva kune nyaya dzemafashama dzinogona kuwanikwa mutsika dzakasiyana siyana uye zvitendero zvakatenderedza pasirese. Iyo muraraungu inomiririra kushandurwa kwepasi mushure kwemafashama akabvisa zvese.
Tava Manheru emafashama makuru. Ndokusaka muraraungu uri zvakare chiratidzo chekufamba uku. Shanduko iyo vanhu vanozopinda ichagadzira denga idzva nepasi idzva maringe nehunyanzvi. Iyo transgender transhuman iri pasi pemureza weiyo Luciferian (muraraungu) hunyanzvi hwenyika yenyika yehurongwa ndicho chinangwa. Remangwana harisi rechisikana uye ramangwana riri rekusangana. Iwe unogona kuona kuti zvishoma zvisina kujeka izvozvi uye ndosaka zvichikosha kuti uongorore mune izvi. Izvo zvakakosha kuti uzive izvi. Ndosaka zvichikosha kwazvo kuverenga bhuku rangu, umo ini ndinotsanangura nzira yakazara kune hutongi hwepasi rese uye nechitendero chenyika uye nekutsanangura zvakadzama kuti chinangwa ndechei.
Source chinyorwa listings: kuchetabg.com, theguardian.com, cointelegraph.com
Tags: 5G, chinese, guta, chikwereti, crypto, mari, Featured, gidhi, Indaneti, of, sesame, ngwara, technocracy, zvinhu, nyika yehurumende, nyika yechitendero
3 December 2019 pa 13: 39
3 December 2019 pa 16: 34
3 December 2019 pa 15: 00
4 December 2019 pa 07: 39
Hi Martin, chinyorwa chakanaka zvakare! Unoziva here kuti ndirini uye kupi yekutarisa ihuman? Handina kukwanisa kuwana izvi zvinosuruvarisa.
4 December 2019 pa 11: 13
Chandinonzwisisa ndechekuti firimu racho rinopfurwa mune yemuno cinema. Ini handina kuona iyo firimu pachangu uye ndichiyeuka kuti inoratidza chokwadi zvakare kushanda sechengetedzo mambure, asi kana uchigona kubaya kuburikidza naro uri munzira yako.
Ini ndinofunga kuti zvinobatsira kuverenga bhuku rangu zvisati zvaitika, nekuti ini ndinotsanangura mutsauko uripakati peusiku humwechete kwatakabva uye hwenhema hwokusavimbika hwevanhu vanochinja. Uyezve, ini ndinotsanangura chikonzero nei ivo (iro bheni remagetsi rinotitungamira munzira ino) vanoda kuti tibatane neAI.
3 December 2019 pa 21: 27
Kutaura kubva kumuverengi pa Facebook:
SMART inoshandurwa ku 'smart' muNL. Nekudaro, iri chidimbu chechimwe chinhu chakasiyana zvachose: "Chakavanzika Mauto eVamwari muKufambi Kunzvimbo".
MuDutch, "chombo chakavanzika chemauto munzvimbo dzekugara"
3 December 2019 pa 21: 57
Greta Thunberg anodzidziswa naJennifer Morgan anobva kuGreenpeace, akafamba naAl Gore (muvambi wevanyatsogoneka, vese-vakabata-nhema manyepedzero 'Chinhu Chisingafadzi Chokwadi') kuWorld Economic Forum muDavos. "Greenpeace inopa mari Greta, uye avo vavanopa vane runyorwa rurefu rweva socialist. Greta akaoneka muAlberta, Canada, mazuva maviri sarudzo dzisati dzaitika, achiudza vanhu kuti nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze, vanofanirwa kusiya mabasa.
Greenpeace yaive NGO yakaunza muraraungu sechiratidzo pasi rese. Mubhuku rangu ini ndinotsanangura nei muraraungu ndiyo chiratidzo chetsva yenyika yetekinoroji uye inofanira kutitungamira takananga mukubatanidzwa neAI.
Tikugashirei kumushini (akaimba Pink Floyd).
4 December 2019 pa 11: 12
4 December 2019 pa 11: 18
Ehe, iyi bhendi inoramba iri yandinofarira ... mazwi akasimba.
Uyezve, izita rakakosha. Vakatoona iwo 'muchina' uchimisikidza.
« Rutger Bregman anodaidzira fascist UN kutonga
Ziva iyo nhoroondo kuti unzwisise iyo UN Age 2030 »
Total Visits: 16.081.625